हेर्दाहेर्दै आयो । नपत्याउदा नपत्याउदै हुने भो । स्थानीय निर्वाचनका लागि देशै पुरा चुनावमय भएको छ । कस्को चुल्होमा चाँही हिजोआज चुनावी चर्चा छैन? कुन चिया पसलमा आज्काल पाटीको मनोमालिन्यले रौनक छाएको छैन? सामान्य भनाभनदेखि लिएर यतिखेर गाँउ घरमा कठालो सामातासमात, ढुङ्गा हानाहान, खुट्टा तानातानसम्म हुन्छ । यतिबेलै हो काङग्रेस, एमाले र माओवादीको छुट्टा छुट्टै पानी भर्ने कुवा हुने, अलग अलग चिया खाने पसल हुने, बेग्ला बेग्लै दुध पुर्याउने डेरी हुने अनि एकआर्काको मेलापर्व पनि नचल्ने । चुनाव प्रचारप्रसारकै क्रममा ओल्लोपल्लो घरका दाजुभाईबीच हात हालाहाल हुन्छ, रिसारिस हुन्छ, चुनावी चश्का मत्थर नहुञ्जेल आँखा तरातर हुन्छ । धुरी धुरीमा कस्ले पहिला पाटिको झन्डा ल्याएर गाड्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा त झन चर्कै हुन्छ । सब्से ठुलो झन्डा छानामै लगेर फहराउनेको नाक त झन घिराँैला जत्रो हुन्छ । यतिबेला हरेक ठाउँ र समयमा मानिसका कित्ता छुट्टिएका छन् । हरेकले बिपक्षी पाटिकोलाई पारी र आफ्नो पाटिकोलाई वारी भन्छन् । अथवा यस्तै अन्य कुनै कोडभाषा प्रयोग गर्दछन् । कुनै कित्तामा प्रष्ट आवद्ध नभएको स्वतन्त्र मान्छेलाई त लिङ्ग नखुलेको वा नपुंसक कै पगरी गुथाइदिन्छन कार्यकर्ताहरुले ।
फेरी अहिले त पाटिहरुको सङ्ख्या गनिसाध्य छैन । कुनै न कुनै ब्यक्ती कुनै न कुनै पाटिको नेता भईरहेकै हुन्छन् । सामान्य तया एउटा वडा कै कुरा गरौ । एउटा पटिको पाँच जना उठ्दा, जम्मा पाँच् वटा पाटी मात्र भए भने पनि पच्चिस जना त उम्मेद्वार मात्र हुन्छन्, बडो अचम्म !
हिजो आज एक खालका मान्छेहरुले सडक ब्याप्त छ । मोटरबाइकमा एउटै पाटिका चार वटा झन्डा चारतिर राखेर फिलिली कुद्ने । यो उनीहरुका लागि खुबै शानको कुदाई हो, यतिखेर उनीहरु सोच्दा हुन् रकेट चडेर चन्द्रमा छुन गैरहेछु । पाटिका कार्यकर्ता मात्र हैन बल्की मेयर नै आँफैले टप्काउन लागेको जस्तो अहमता देखिन्छ उनीहरुमा, स्पिड लिमिट र ट्राफिक नियम नै शायद बिर्सिन्छन् । त्यसै पनि कतिलाई बाइक उपहार त कतिलाई पेट्रोल बोनस् आएकै हुन्छ ।
अनि अर्को रमाइलो कुरा दुई जना काङ्ग्रेस् समर्थकको अगाडि बस्यो भने भएभरको बुथमा काङ्ग्रेसले बिजय गर्ने जस्ता कुरा गरेको सुनिन्छ अनि एमाले कार्यकर्ता अगाडि बस्यो भने २ प्रतिशत भोट् नआउने ठाँउमा पनि जित सुनिश्चित् छ भनेको सुनिन्छ, फेरि माओवादी समर्थकले त झन् संसारै माओवादीमय भैसकेको शंखघोषै गर्छन् । तटस्थ मान्छेलाई त यथार्थ के हो भेउ पाउन मुश्कील नै हुन्छ । एउटा पाटिकाले अर्को पाटिको उम्मेदवारलाई उडाउछ– “हैट एक्काइसौ शताब्दिमा पनि जाबो एउटा ट्वीटर चलाऊन नजान्नेलाई त के आफ्नो अमुल्य भोट् खेर फाल्नु? वाँ ट्रम्पले एक ट्वीटले विश्व पिट्छन् । तसर्थ भोट त हाम्रा पाटिका जस्ता विकासका संबाहक युवा नेतालाई दिनु पर्छ ।” अर्का पक्षका ले फेरी भनेको सुनिन्छ– “नमच्चिने पिङको सय झड्का । अहिलेको आलाकाँचा यी ठेट्नाहरु जति कौलासे पनि गर्ने केही सक्दैनन् । फेस्बुके गन्थनले राजनिति गरिन्छ भन्ठान्छन् अद्बेस्राहरु पदमा पुगेसि सिन्को भाँच्न सक्दैनन् । न काम गर्ने अनुभव, न सिप, न संसार देखेको मान्छेले फाइँफुट्टी लाउनै पर्दैैन । हाम्रो नेताको जस्तो हुनुपर्छ पाकेको धानको बाला निहुरिए जस्तरी सबैसँग निउरिन्छन्, नम्र हुन्छन्, धैर्यता र कुटनितिमात्र हैन अनुभवले सेताम्मे पाकेको दारी नै चुनाव जित्न काफी छ ।”
चुनाव यस्तो समय हो जतिखेर नचिनेको मान्छेसँग बोल्नलाई कुनै संकोच मान्नु पर्दैन । आफ्नै पाटिको झन्डा बोकेर कोही आयो भने भित्रैदेखि आफ्नोपनको महशुस भएर बोलँु बोलुँ लाग्छ । झन्डै नबोकी लुरुलुरु आयो भने उस्लाई पनि आफ्नो पाटिको एउटा झन्डा थमाइदिन मन लाग्छ वा यो स्टिकर तपाईंको बाइकमा टाँसौँन है? भनेर भनिहाल्न मन लाग्छ । अर्कै पाटिको झन्डा बोकेर आयो भने उस्को पछाडि कति जना मान्छे छन् हेरेर खिसी तिउरी गर्न मन लागिहाल्छ । अघिपछि खुबै ठालु पल्टेर बोल्दै नबोली हिंड्ने उपल्लो दर्जाका झै लाग्ने नेताहरु आज मेयर र उपमेयरमा उठेर नमस्ते ठोक्दै हात मिलाउन छेउमै आइपुग्छन् अनि आमाबुवाको समेत सञ्चोविसञ्चो सोधिभ्याउँछन् । साँचिकै चिनेर हो वा चिनेको जस्तो गर्या हो दैब जानुन् तर साख्य भतिजा जस्तै माया गरी टोपल्छन् । त्यो फेरिएको रङ चुनाव जितेपनी पुर्वावस्थामा पुग्छ, हारेपनी पुग्छ । अर्थात उस्ले हामीलाई फेरी पनि चिन्ने छैन, चाहे चुनाव जितोस वा हारोस् । कुरा आफुलाई चिन्ने वा नचिन्नेको हैन, कुरा प्रवृत्तिको हो । काम गर्ने खुवी र इच्छा शक्ती छ भने कसैले कसैलाई चिनिरहनु पर्दैन । विकास गरे पुग्छ । रुप परिवर्तन गर्नेले आज एउटा घोषणा पत्र देखाएर भोली काम अर्कै गर्न सक्छ । त्यसैले भनेको यो नितान्त प्रवृत्तिको कुरा हो । सङ्ग्लो अतित र प्रस्ट बिचार छ भने बाटाघाटामा जो देखे पनि ढोगुँला झै गरिराख्नु पर्दैन, उस्ले जरुर जनमत पाउछ ।
[कान्तिपुर साप्ताहिक २०७३ बैशाख २९ गते शुकरबारको अङ्कमा प्रकाशित् ] Click Here
प्रतिकृयाको लागि : [email protected]
Blog Current affairs Election Lifestyle
Labels: Blog Current affairs Election Lifestyle
hait kuro chahi lauchhan hai sathi le